Izinto Onokuzisebenzisa Ekhaya - I-Airbnb
Izinto Onokuzisebenzisa Ekhaya
Yonwabela zonke izinto eziluncedo zekhaya kule duplex intle, kwaye ifumaneka ngokufanelekileyo ibekwe kwindawo ezolileyo. Le yunithi i-duplex ibekwe ngaphakathi kwemizuzu yolwakhiwo olwahlukeneyo lwaseColumbus ebumelwaneni, kufutshane neLincoln Park iidayimani zebhola, ukukhwela ibhayisekile kunye neendlela zabantu ziphakathi kwemayile. Le ndawo ineentlobo ngeentlobo zeendawo zokutyela ezithandwayo kwaye ikwayimizuzu engama-30 ukusuka kwipaki yaseBrown County naseNashville.
Le ndawo iphindiweyo ikwindawo ethe cwaka nekhuselekileyo. Le yunithi iquka i-Smart TV kwigumbi lokuhlala elinxibelelene neintanethi kwaye inee-app ezithandwayo ezifakwe ukuze iindwendwe zizisebenzise kwiiakhawunti zazo ezikhoyo. Nceda uqaphele ukuba i-TV ayifakwanga ngamajelo eentambo. Iveranda yabucala iyafumaneka kwindawo yokutyela phandle.
4.88 · Izimvo eziyi-232
IColumbus, ngelixa isaziwa ngoyilo lwayo, ikwabonelela ngamanye amatye anqabileyo alapha ekhaya! I-Simmons Winery, ithandwa kakhulu ekuhlaleni. Idityaniswe kwindawo yokuthengisa iwayini yi-450 North Brewery ethandwayo. I-Eclectic Zaharakos Ice Cream Parlor inikezela ngezinto ezithandwayo zaseMelika ukusukela ngo-1900. I-ZwanzigZ Pizza libhaso eliphumelele ibhaso le-brew pub kunye ne-pizza parlor. Indawo ikwabonelela ngokhetho olubanzi lwee-sushi ozithandayo.
Iindwendwe zidla ngokuzingenela ngokwazo kodwa ndingafumaneka ukuba ndingene okanye uninzi lwexesha iindwendwe zifuna uncedo.